तपाइँको मनपर्ने बचपन कार्टुन चरित्र दानवहरु मा बदलियो! - iHorror
घर हरर मनोरन्जन समाचार तपाइँको मनपर्ने बचपन कार्टुन चरित्र दानवहरु मा बदलियो!
तपाइँको मनपर्ने बचपन कार्टुन चरित्र दानवहरु मा बदलियो!
by डेनियल हेगार्टी अक्टोबर 12, 2016
द्वारा लिखित डेनियल हेगार्टी अक्टोबर 12, 2016
यी कार्टुन चित्र को रूप मा भयानक को रूप मा, म मद्दत गर्न सक्दिन तर Eeyore र विनी पूह को विचार देखि एक किसिमको दुखेको देखि केही दुखी महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रह आतंक। त्यहाँ कुनै संदेह छैन डेनिस कार्लसन, स्विडेनी ट्याटु कलाकार एक धेरै रचनात्मक र प्रतिभाशाली ग्राफिक्स इलस्ट्रेटर हो।
साथसाथै प्यारो कार्टुन पात्रहरूलाई भूतमा बदल्ने साथसाथै उसले डरावनी आइकनहरू सहितको कलाकृति पनि गर्दछ जेसन Vorhees र फ्रेडी क्रुगर। स्पष्ट रूपमा हॉरर फ्लिकको फ्यान। त्यसोभए, तलका कतिवटा कार्टुन राक्षसहरू तपाईं चिन्नुहुन्छ?
ट्वीटी - Looney ट्यूनहरू
माइक Wazowski - दानव इंक
पिकाचु - पोकेमोन
Minion - मलाई नीच
श्रेक - श्रेक
निम्न पृष्ठहरूमा थप हेर्नुहोस्
TWD सत्र 7: नेगनले एक भन्दा बढि मार्यो?
"क्राफ्ट" अद्भुत "गिर्वेटेकर" छोटोमा "मिनेट केटीहरू" भेट गर्दछ